ဝန်ခံချက် - အပျိုစင်ဘ ၀ ကိုဘယ်လိုပျောက်သွားတာလဲ။ - သတင်း
ဝန်ခံချက် - အပျိုစင်ဘ ၀ ကိုဘယ်လိုပျောက်သွားတာလဲ။
MSN ၏ပထမ ဦး ဆုံးချစ်သူများ၊ ယစ်မူးနေသောခန်းမများ၌အရက်သေစာသောက်စားခြင်းသို့မဟုတ် ၁၄ နှစ်အရွယ်တွင်အခြားကျောင်းမှတစ်စုံတစ် ဦး ထံဆုံးရှုံးသွားသည်ဟုဆိုခြင်း၊ သင်မသိပါ၊ လူတိုင်းကသူတို့မေ့တတ်သည့်အရာဖြစ်သော်လည်းသူတို့၏အဆင်မပြေမှုကိုပထမဆုံးအကြိမ်သတိရသည်။ သင်၏ဂုဏ်အသရေနှင့်ကြောက်မက်ဘွယ်သောပထမဆုံးအကြိမ်အကြောင်းကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့မေးခဲ့ပြီးဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်အတွေ့အကြုံကိုအတူတူမျှဝေနိုင်သည်။
ငါ ၁၅ နှစ်ရှိပြီ။ အိမ်မှာပါတီပွဲလုပ်တယ်။ ငါ Carlsberg ၏ဘူးခွံသုံးခုရှိခဲ့ခြင်းနှင့် ballsy ခံစားနေရတယ်သကဲ့သို့ငါ့မျက်နှာကိုချွတ်ဖြစ်ခြင်းခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူလာခဲ့သည့်သူငယ်ချင်းသုံးယောက်ထက်အခြားတစ်ယောက်ယောက်နှင့်စကားပြောရန်လုံလောက်သောယုံကြည်မှုရှိခဲ့သည်။ ငါစကားပြောသောပထမ ဦး ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်မှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့စကားပြောတယ်နှင့်တ ဦး တည်းအရာကအခြား ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ နောက်ဘက်ဥယျာဉ်အတွင်းရှိ trampoline ကိုလိင်ဆက်ဆံခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအတိတ်ကလမ်းလျှောက်နေတဲ့လူတွေစီးလာတဲ့မီးခိုးတွေကိုလျစ်လျူရှုလိုက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့လိင်ဆက်ဆံမှုပြုခဲ့ပါတယ်။ အမှန်တကယ် trampoline ပေါ်၌လိင်ဆက်ဆံရန်မှာအလွန်ခက်ခဲသည်၊ သင်ကြောက်ရွံ့မှုဖြင့်လှုပ်ခါသောအခါ ပို၍ ပင်ခက်ခဲစေသည်။ Carlsberg ရဲ့ဘူးခွံသုံးလုံးကိုကျွန်တော်မလာနိုင်တာသေချာပါတယ်။ ပြီးတော့သူမလည်းမသေချာဘူး။ အပေါ်ထပ်မှာရှိတဲ့အိပ်ခန်းထဲသူမဝင်ထိုင်ပြီးကျွန်မတို့သီးခြားစီလမ်းလျှောက်သွားခဲ့တယ်။ သူမသည်သူမ၏ရည်းစားနှင့်အတူပြန်လည်ရရန်ကြိုးစားနေစဉ်အတွင်းနှင့်စိတ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်။ ငါသူမ၏စိတ်နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာတောင်းပန်ခြင်းနှင့်ထွက်လမ်းလျှောက် - ငါကတည်းကသူမ၏မြင်ကြပြီမဟုတ်။
ငါအသက် ၁၇ နှစ်ရှိပြီ။ ကျွန်ုပ်သည် Shit ဇာတိမြို့ရည်းစားတစ် ဦး နှင့်တစ်နှစ်အတွက်တစ်ဝက်အတွက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်နှင့်သူမလိင်ဆက်ဆံခွင့်မပြုခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ဤမျှထူးဆန်းသောမီးခိုးရောင်အရိပ်ကိုသွားနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါလုပ်ခဲ့တုန်းကငါ (သူ့အိမ်၊ သူ့အမေအလုပ်မှာရှိတုန်းက) အလွန်တုန်လှုပ်ချောက်ချားခဲ့တယ်။ ဒါကတကယ်ကိုအံ့သြစရာကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်၊ ငါကသဘာဝနတ်ဘုရားမဖြစ်လိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ဒါဟာတော်တော် shit ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်နာရီဝက်ခန့်ခံစားခဲ့ရပြီးအမှန်တကယ်တွင်သာသနာပြုနှစ်မိနစ်နှင့်တူသည်။ ငါက shit ခဲ့ပုံကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ထိခိုက်နာကျင်မှုအကြောင်းကိုဤအရာအလုံးစုံပုံပြင်များကိုကြားချင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ဒါဟာပျင်းစရာပဲ။ သူ့မှာပိုစတာတွေအများကြီးရှိပြီးတစ်ခုမှာကိုးကားထားတဲ့ Eminem ပိုစတာပဲ။ ငါအရမ်းပျင်းလာတယ်၊ အချိန်ကုန်လွန်ဖို့ကိုးကားချက်တွေကိုစဖတ်ခဲ့တယ်။ သူကကျွန်တော့်ကိုဖမ်းမိတယ်၊ ငါစာသားတောင်းပန်ရတယ်၊ ပြီးတော့ကျန်တဲ့ကျန်အပိုင်းတွေကိုကြည့်လိုက်တယ်။ သူကဒီထောင့်ကနေပြောင်သွားတာနဲ့တူသူလည်းမျိုး။ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့
ကျွန်မအသက် ၁၆ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး Valentine Day (ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကျွန်ုပ်သိပါတယ်) ပါ။ အရာရာတိုင်းကိုစံနမူနာ ထား၍ စီစဉ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ချက်ပြုတ်နေတဲ့ညစာ၊ ကျွန်တော်သောက်ခဲ့သောစပျစ်ဝိုင် - ကျွန်ုပ်သည်သူမအားအစောပိုင်းကနှင်းဆီအချို့ကိုတောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော့်မိဘတွေကညစာစားဖို့အပြင်ထွက်သွားပြီးစိတ်အခြေအနေကိုသတ်မှတ်ထားတယ်၊ ဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့အာရုံကြောတွေသက်သာအောင်အနီရောင်မျက်မှန်အနည်းငယ်ကိုဆွဲချလိုက်တယ်။ သူမရောက်ရှိလာပြီးညစာကောင်းကောင်းရသွားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အ ၀ တ်အစားများကိုဖြိုဖျက်နေကြသည်။
ယခုငါကအာရုံကြော, ဒါမှမဟုတ်စပျစ်ရည်, ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ကောင်းနှစ် ဦး စလုံး၏ပေါင်းစပ်ခဲ့လျှင်မသေချာဘူး, ဒါပေမယ့်ငါကတက်ရနိုင်ဘူး။ စာသားအရပင်နည်းနည်းပင်။ ကျွန်တော့်ငပဲဟာအလုပ်မလုပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မစတင်မီမှာဘယ်တုန်းကမှလိင်မဆက်ဆံဖူးဘူး၊ ငါဟာလိင်မှုကိစ္စကင်းစင်တဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတော့မလားဆိုတာစိုးရိမ်ခဲ့တယ်။
ငါနာရီဝက်အကြာမှာသနားစရာစိုက်ထူစုဆောင်းဖို့အကြောင်းကိုစီမံခန့်ခွဲအချိန်တွင်, စိတ်ဓာတ်မျိုးယိုယွင်းခဲ့သည် - အထူးသဖြင့်ငါ့မိဘများအိမ်ပြန်မတိုင်မီကျနော်တို့အလျင်အမြန်ခဲ့ရတယ်။
မိန်းကလေးတစ် ဦး အော်ဂဇင်စေရန်အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်
သူ၏ K-hole အကြောင်းအသေးစိတ်၊ Adventure Time နှင့် The Big Lebowski ၏ကြည့်ရှုခြင်းအပါအဝင်ပထမ ဦး ဆုံးအတန်းရက်စွဲများပြီးနောက် ၁၇ နှစ်အရွယ်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သည်အပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးရမည့်သူဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါအများကြီးပိုခံစားခဲ့ရပြီး၊ သူဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးကျောင်းမှထွက်သွားသောအသက်ကြီးသူတစ် ဦး ။ ကျွန်ုပ်သည်သူငယ်ချင်းများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည့်ပထမ ဦး ဆုံးသောအခါစိတ် ၀ င်စားမှုမရှိခြင်းသည်အရေးမကြီးပါ။ ကျွန်တော့်မိဘတွေကအောက်ထပ်ကိုဆင်းသွားတယ်၊ ကွန်ဒုံးတွေကုန်သွားတယ်၊ ငါမစဉ်းစားတော့ဘူးတခါတလေဒါကလား။ အပျိုစင်ဘဝဆုံးရှုံးမှုသည် Sexy and unromantic ဖြစ်သည်။
ဒါဟာငါတို့သုံးရက်ထွက်သွားခဲ့ချင်ပါတယ်, ငါ့ပထမ ဦး ဆုံးတကယ့်ရည်းစားဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမအိမ်တွင်သူမမိဘများနှင့်ပထမဆုံးတွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်သည်။ ငါသူမ၏မိဘများနှင့်အတူတကယ်ကောင်းကောင်းအပေါ်ခဲ့ချင်ပါတယ်ကြောင့်အားလုံးမျှမျှတတသာယာသောဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမ၏မိဘများနှင့်သူတို့၏သူငယ်ချင်းများကလမ်းလျှောက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးကျွန်မတို့ကိုအိမ်ထဲ၌တစ်ယောက်တည်းထားခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ၏အပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးပြီးသားဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုအထူးပြုလုပ်လိုသည်။ သူမသည်ဖယောင်းတိုင်များ၊ တေးဂီတ၊ ကိုးကိုက်လုံးလုံးလုပ်ရန်စိတ်ကူးကိုလွှင့်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော့်အသက်က ၁၇ နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပြီး၊ အိမ်ထောင်ဖက်များကသူတို့ရဲ့ V ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော်ဟာအဲဒါကိုကျော်လွှားချင်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ဒါကြောင့်သူမကသူမစားဆင်ယင်မှုကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်မဂျင်းဘောင်းဘီကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ စက္ကန့်သုံးဆယ်လောက်မှာငါခံစားဖူးသမျှထဲမှာအအားရဆုံးပျော်ရွှင်မှုပဲ ခြေအိတ်များမှအပကျွန်ုပ်၏အပျိုစင်ဝတ်ရုံကိုအပြည့်အ ၀ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ငါထို့နောက်ငါ့အအကောင်းဆုံးအိမ်ထောင်ဖက်ကိုခေါ်ဖို့အခန်းကနေထွက်သွားနှင့်တစ်ခုခုဖြစ်ပျက်ရဲ့သူ Mike ကပြောသည်။
ငါလေးလေးနက်နက်ချစ်ရမယ့်ကောင်လေးကိုတွေ့ပြီးခါစပဲရှိသေးတယ်။ ဒါကကျွန်တော့်ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူသိတယ်။ ဒါကြောင့်ငါ့မိသားစုအိမ်ကနေလမ်းပေါ်မှာကြယ်နှစ်ပွင့်ဟိုတယ်အခန်းတစ်ခန်းကိုကြိုတင်မှာယူပြီးငါ့အတွက်တကယ်ထူးခြားအောင်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါသည်ငါ့အိမ်ကိုစာသားခြောက်တံခါးကိုဆိုလိုတာ, ယေဘုယျအဓိပ္ပာယ်အတွက်လမ်းဆင်းဆိုလိုဘူး။ ဒီဟာကစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်မရခဲ့သလိုငါဂီတကိုအပြတ်အသတ်အသာရပြီးမသက်မသာဖြစ်ရပ်တစ်ခုလုံးအလယ်မှာ Nirvana မှ Rape Me သီချင်းပေါ်လာတယ်။ ကျနော်တို့နောက်တစ်ခါထပ်ကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ငါလစုံတွဲတစ်တွဲအဘို့အကြှနျုပျ၏ရယ်စရာရည်းစားနှင့်အတူရှိခဲ့, ငါရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ငါတကယ်သတိရကြပါဘူး။ ကျွန်မအသက် ၁၆ နှစ်ရှိပါပြီ။ လူတိုင်းကအချိန်ကုန်နေကြတယ်ထင်ပြီးအခွင့်အလမ်းရနေချိန်မှာငါဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်ခရစ်ယာန်သာသနာပြုဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။
ဒါဟာမျိုးပဲဖြစ်ပျက်, စီစဉ်ထားအရာမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ကျနော်တို့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ထွက်သွားခဲ့ကြပေမယ့်နှစ်ပေါင်းများစွာမိတ်ဆွေများဖြစ်ခဲ့ကြပြီးကျွန်မရဲ့သူငယ်ချင်းဟောင်းတွေကအဲဒီလိုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ တစ်ညမှာငါအဲဒီ့ကောင်လေးလို့ထင်ခဲ့တယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့အိမ်မှာယစ်မူးတဲ့ညတစ်ညမှာပြန်သွားပြီးခရစ်ယာန်သာသနာပြုလိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ် မိမိအတစ်ခုတည်းအိပ်ရာ၌တည်၏။ ဒါဟာတကယ်နာကျင်ခဲ့ဘူးအလွန်စိတ်ကူးယဉ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ သူဟာအရင်ကလိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးပေမယ့်သူဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာမသိခဲ့ဘူး။ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်ထိုအချိန်ကသူ့ကိုစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့သည်မှာမသေချာပါ။ ငါနံနက်ယံ၌ငါ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေကိုခေါ်ခြင်းနှင့်ငါပထမ ဦး ဆုံးပြုမိချင်ပါတယ်သူမ၏ပြောပြနိုင်ဖြစ်ခြင်းအပေါ်အမှန်တကယ်ပိုပြီးပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။
သူမသည်ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးသောသင့်တော်သောရည်းစား (သင်၌ကျွန်ုပ်သည်ဝန်ထုပ်ကြီးရှိသော်လည်းသင်အရိုးမဟုတ်လျှင်သူတို့သည်သင့်ကောင်မလေးမဟုတ်ပါ) ။ သူမသည်ကျွန်ုပ်ထက်နှစ်အနည်းငယ်ကြီးပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၄ နှစ်သာရှိသေးသည် ဖြစ်၍ သူမမှာ ၁၇ နှစ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ခြောက်လပတ်လုံးထွက်ခွာသွားခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ဒေသခံမက်သဒစ်ချာ့ချ်ကသတိထားမိ ခဲ့၍ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုသင့်သောထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်မှုကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ မထိုက်မတန်ရည်းစားနှင့်အတူ horny 14 နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်း, ရုံရုံငါ့အဘို့ကဖြတ်တောက်မခံခဲ့ရပါဘူး။ သူမသည်အနည်းငယ်အသက်ကြီးသော်လည်းသူသည်ကျွန်ုပ်၏မူလကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုကိုသိသောကြောင့်အပျိုစင်ဘ ၀ နှင့်နားလည်မှုရှိသောမိန်းကလေးဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ တစ်နေ့ (သိသာထင်ရှားတဲ့စာသားကျော်) ငါအချိန်လာပြီခံစားရတယ်သူမ၏သို့ပြောသည် (ငါသင်းအုပ်ဆရာ shit နှင့်ပြည့်ဝ၏ဘုရားသခငျမတည်ရှိခဲ့ထင်နှင့်တစ်ချိန်တည်းနှင့်အတူကောင်းမွန်စွာတိုက်ဆိုင်) ။ ကျွန်မကိုကျောင်းကနေခေါ်သွားဖို့သူမမှာ (သူမမှာကားရှိတာသေချာတယ်) လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတဲ့အိမ်မှာမိဘတွေဆီကိုခေါ်သွားဖို့ပြောခဲ့တယ်။ ငါတိတ်တဆိတ် lube ဝယ်ငါ့အိပ်ရာဘေးမှာက stashing ဝယ်ယူခဲ့သည်တစ်ည။ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါအဝတ်တွေကိုချွတ်လိုက်တယ်။ (အကြိမ်ပေါင်းများစွာလုပ်ခဲ့ပေမယ့်ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး) ပြီးတော့သူမကိုရှေ့တန်းတင်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ သူမသည်အများကြီးဆူညံသံအောင်မခံခဲ့ရပေမယ့်အချိန်ကတကယ်ဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး။ ငါလေးနက်လေးစားစွာပြုမူသောလုပ်ရပ်သို့သုံးလေးမိနစ်အကြာတွင်သူမကသူမ၏ leant ကျော်လှိမ့်ခြင်းနှင့်ကဘယ်လိုလဲဟုသူမ၏မေးတယ်။ သူမသည်သူမကကျွန်တော့်ခြေထောက်ကလေးများ၏ကျောဘက်တွင်ဖြစ်သည်။
ဒါဟာသင်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူတက်ဖွင့်ခြင်းနှင့်အဲဒီမှာအခြားမည်သူမဆိုတကယ်မသိရပါဘူးရှိရာသူတို့အားအိမ်သူအိမ်သားပါတီများတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး စကားစမြည်ပြောဆိုခြင်းအစကောင်းပြီးနောက်ကန ဦး မိန်းကလေးနှစ်ယောက်၏ကောင်းသောစာအုပ်များမှာအဆုံးသတ်သွားသည်။ သူတို့ကို Lisa နှင့် Amy လို့ခေါ်ကြစို့။ ငါငယ်ရွယ်စဉ်အခါသင်ပြုကြောင်းနုံ, အပျိုကညာလမ်းထဲမှာအဓမ္မနှင့်အတူပရောပရည်ခဲ့ကြသူအမေီ, အနီးအနားမှာနေထိုင်နှင့်ကျွန်တော်သူမ၏ (အချည်းနှီးသော) အိမ်သို့သွားအကြံပြုထားသည်။ သူငယ်ချင်းကစိတ်မ ၀ င်စားတော့ဘူး၊ နောက်ပိုင်းမှာသူကမူးယစ်ဆေးဝါးလွန်းတာကိုအပြစ်တင်ပြီးမိန်းကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ငါ့ကိုချန်ထားလိုက်တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့အိမ်သို့ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက် Lisa သည်သူမ၏ဆင်ခြေများပေးရန်အချိန်မဖြုန်းဘဲအခန်းတစ်ခန်းထဲတွင်အိပ်စက်သည်။ မေမေနဲ့ကျွန်မဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်ပြီးသူမရဲ့ဆေးလိပ်သောက်ဖို့ကမ်းလှမ်းတာကိုကျေးဇူးတင်စွာလက်ခံလိုက်တယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အဆင်မပြေမှုနည်းနည်းဆက်ရှိနေပြီးရုပ်မြင်သံကြားကိုသူမဖုံးအုပ်ထားသည်။ ITV2: လူတိုင်း၏ဒုတိယအကြိုက်ဆုံး Kevin Bacon Tremors ရုပ်ရှင်ကိုဖွင့်ထားသည်။ သငျသညျအရက်မူးနှင့်တစ်နာရီကျော်ကထဲမှာပူးပေါင်းတဲ့အခါ, ထိုရုပ်ရှင်ဘောလုံး -to-the- နံရံများရူးသွပ်သည်နှင့်မည်သည့်တင်းမာမှုမကြာမီငါတို့ကမှာခြောကျခြားဖွစျပွီးရယ်မောအားဖြင့်ကျိုးပဲ့ခဲ့သည်။ ငါတို့ဘယ်လိုဒီပွိုင့်ကနေတိုးမြှင့်တစ်ဝက်အဝတ်အချည်းစည်းထွက်အောင်ဆိုဖာပေါ်ငါအတော်လေးမသေချာဘူး။
သူမ၏အိပ်ခန်းထဲမှာထကျနော်တို့နှစ် ဦး စလုံးအဝတ်အချည်းစည်းနေနှင့်ငါလွန်စွာအတိတ်ကာလတတိယအခြေစိုက်စခန်းငါ့ရုံးတင်စစ်ဆေး -and အမှားလာရောက်လည်ပတ်သူထံမှလေ့လာသင်ယူအရာအားလုံးကိုမှတ်မိဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။ အမှုအရာသူမတို့သည်ကြီးစွာသောအချိန်ရှိခြင်းရဲ့, ကောင်းစွာမယ့်ပုံရသည်။ အရက်နှင့်အချိန်တို့သည်မှတ်ဉာဏ်ကိုဖုံးလွှမ်းသွားစေသော်လည်းငါလုပ်မိသောအချိန်ကာလကိုမှတ်မိသလား။ သန့်ရှင်းသောဘုရား shit ငါကလုပ်နေတာ! fuck ဆိုတဲ့ဒီအေးမြသည်။ သာမန်ဆယ်ကျော်သက်များကတစ်မိနစ်ခန့်ကြာမှသာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောဒဏ်ရာများကိုရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်။ သေချာတာပေါ့၊ ငါတို့ကခရစ်ယာန်သာသနာပြုတွေထက်ကျော်ပြီးတိုးတက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ နောက်တစ်နေ့မနက်မှာငါအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်သူမငါ့ကိုသောကြာနေ့မှာ Transformers ကိုကြည့်ဖို့ကျွန်တော့်ကိုပြန်ခေါ်ခိုင်းတယ်။ ငါသူမ၏ပထမ ဦး ဆုံးမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်ငါနေဆဲထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကူးနေ့စွဲညဉ့်အဘို့အရည်အချင်းပြည့်မီဆိုတဲ့အချက်ကိုအိမ်ပြန်အပေါင်းတို့သည်လမ်း, ငါ့ခြေလှမ်းတစ်ခုနွေ ဦး ထားတော်မူ၏။
မင်းကအသက် ၁၃ နှစ်သာရှိသေးပြီးအပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးတော့မယ့်အချိန်မှာအရာရာတိုင်းဟာမင်းရဲ့စိတ်ကိုဖြတ်ကျော်သွားစေတယ်။ ငါမှန်တယ်လား သူမခြေထောက်ကြားမှာဘာရှိသလဲ။ ငါဒီအတွက်ထောင်ချမှာလား Blue Peter ကိုဖမ်းရန်ကျွန်ုပ်အိမ်သို့အချိန်မီပြန်နိုင်ပါသလား။ သူမသည်ကျွန်မ၏ပထမ ဦး ဆုံးသင့်လျော်သောရည်းစားဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့နှစ်လထွက်သွားခဲ့ပြီးပြီ၊ ဒါကိုလျောက်ပတ်စွာလုပ်ဖို့အချိန်တန်ပြီဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါကြောင့်ကျောင်းအပြင်ဘက်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေမရှိတဲ့တစ်ရက်အတွက်ငါတို့စီစဉ်ခဲ့တယ်။ သူမ၏မိဘများသည်ယောဂအတန်းသို့ထွက်ခွာသွားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တစ်နာရီသာကျွန်ုပ်လိုအပ်သည်။ ငါကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်သကဲ့သို့ဆွဲဆောင်နိုင်သည့်ပုံစံဖြင့်ကြည့်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ယူနီဖောင်း၏အပေါ်ဆုံးခလုတ်ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းနှင့်စာတန်၏လည်စည်းကိုလျှော့ချခြင်းတို့ကရှုပ်ထွေးမှုကိုဂရုစိုက်နိုင်သည်။ (Hugo Boss သည်ကျောင်းသို့ပြန်သွားသည့်ကြော်ငြာများကိုကျွန်ုပ်လုပ်ခဲ့မည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်သည်အရူးဖြစ်လိမ့်မည်) ။ ကျနော်တို့သူမ၏အခန်း၌ရှိကြ၏တစ်ချိန်ကကျနော်တို့ဖြောင့်ဆင်းတယ်။ ရိုးသားဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုမပါဝငျမယ်လို့အဘယျသို့သိသောကြောင့်, foreplay ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အများကြီးရှိခဲ့သည်မဟုတ်။ ငါတို့အတွက်တရားမျှတမှုရှိဖို့ငါလိင်သင်ခန်းစာမစခဲ့ဘူး၊ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သင်ခဲ့တယ်။ သာသနာပြုငါးမိနစ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြှောက်ပင့်မယ်လို့ပြောတာကတကယ်တမ်းကျတော့လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်တ ၀ က်လောက်ဖိနှိပ်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးတော့ကိုယ့်မျိုးထွက် petered ။ သိသာထင်ရှားတဲ့ကျနော်တို့ချက်ချင်း (ငါတို့ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ကြပေမည်ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့တိရိစ္ဆာန်များမဟုတ်ခဲ့ကြပေမည်) ပြီးနောက်ဝတ်ဆင်တယ်ထို့နောက်ထို့နောက်တိတ်ဆိတ်စွာအိပ်နေရာ၌ဖြည့်ကြောက်မက်ဘွယ်သောအခြင်းနှင့်မာနထောင်လွှားအရောအနှော။ ဒါဟာအကြီးမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်ကျိန်းသေဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်, ဘယ်သူမှငါ့ထံမှငါ့ကိုယူနိုင်ဘူး။ သူမ၏မိဘများစောစောစီးစီးပြန်ရောက်လာသောအခါကျွန်ုပ်၏လိင်အင်္ဂါလွန်ကဲသောအရာသည်ပြတ်တောက်သွားသည်။ ထို့ကြောင့်ငါ Hollyoaks အတွက်အိမ်ပြန်ရောက်သည်။ ဝမ်းနည်းစရာကတစ် ဦး တည်မြဲအချစ်ဇာတ်လမ်းမဟုတ်ခဲ့ပေ။ မကြာခင်မှာပဲသူမက MSN အဖွဲ့နဲ့စကားပြောတဲ့အခါငါနဲ့အတူစကားမပြောဖြစ်တော့ဘဲစိတ်ခံစားမှုတွေ၊ e-cards နဲ့ Luv ရဲ့ကြေငြာချက်တွေကသူ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ငါအစဉ်အဆက်အပျိုဖော်ဝင် hit သွားလိုပါသလား? အဲဒါကျွန်တော့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ပဲ။ ၎င်းသည် ၁၄၊ ၁၅ နှင့် ၁၆၊ ၁၇ အနည်းငယ်ဖြစ်ခြင်း - အဘယ်ကြောင့်ငါအပျိုဖော်ဝင်ချိန်ကိုတက်မည်နည်း။ ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်ပျက်မလဲ ဘယ်အချိန်မှာလဲ။ သိသာထင်ရှားတဲ့အပျိုဖော်ဝင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်သိသာငါအလောင်းတော်ကိုရခဲ့တယျ။ ကျွန်တော့်အသက် ၁၈ နှစ်ပါ၊ ကျွန်တော်ရည်းစားဟောင်းဖြစ်ခဲ့ဖူးသူပါ နက်ရှိုင်းစွာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌အိပ်ရာအပြင်တစ်ဝက်ကျိုးကျိုးပြီးမိဘများကိုနိုးထစေခြင်း (အမေတံခါးကိုလာခေါက်နေခြင်း - သင်နှစ် ဦး အိုကေလား) စေ့စပ်စွာစီစဉ်ထားသည်။ ငါအချိန်ကုန်ဆုံးသောအထင်ရှားဆုံးလိင်ဆိုင်ရာပွဲ ဦး ထွက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရမည်။ စည်းချက်မဆန်ခြင်း၊ သင်ကဲ့သို့သော shit ဟုသင်ကကျွန်ုပ်၏ရှပ်အင်္ကျီကိုမချွတ်ရန်အဆင်မပြေဖြစ်နေသည်။ ငါက၏အတွေးမှာအခုအချိန်မှာ cringing တာနဲ့သင်တို့ကိုလည်းငါအရမ်း cringing နေမျှော်လင့်ပါတယ်။
- ငါကညာပေါ့။ ငါဂရုမစိုက်တော့ဘူး
- သင်၏အပျိုစင်ဘဝဆုံးရှုံးမှုသည်အများဆုံးဖြစ်သည်။ ၁၈ နှစ်ဖြစ်သည်